Oraahdii aheyd qofkii dadaala wuu gaaraa, dad taariikhdooda ku dayasho mudan… – Hagaag.com
Oraahdii aheyd qofkii dadaala wuu gaaraa, dad taariikhdooda ku dayasho mudan…
Posted on 16 Seteembar 2018 by Admin in Lifestyle // 0 Comments
Elon Musk waxaa loo arkaa mid ka mid ah astaanta technology-ada ganacsiga ee ugu muhimsan ee adduunka oo dhan, waa aasaasaha shirkadaha ” Tesla” iyo “Space X”, waxaa laga yaabaa magacyada ugu caansan ee dunida oo gaaray guusha technology-yada markii la eego qeybaha tamarta, aerospace iyo gaadiidka.
Musk ayaa ku biiray jaamacada Pennsylvania wuxuuna ka qaatay shahaadada bachelor-ka ee physics kadibna wuxuu hal sano dhigtay dugsiga Wharton ee ganacsiga “Business” iyadana wuxuu ka qaatay shahaadada bachelor-ka ee dhaqaalaha.
Sanadkii 1995-kii asaga oo da’diisuna aheyd 24, Musk wuxuu go’aansaday in uu u guuro California si uu u bilaabo daraasaddiisa darajada Doctorate ee cilmiga physics-ka ee jaamacada Stanford, labo maalmood kadib wuxuu isaga tagay jaamacadii iyo shahaadada Ph.D, wuxuu ka mid noqday dadka u ordayay in ay fuliyaan mashaaric tijaabo ah oo ku xiran Internet-ka, kaasi oo waqtigaasi uu korayey bartamihii 90da.
Wuxuu bilaabay shirkadiisii ugu horeysay ee barnaamijyada ee “Compaq” iyadoo markii dambe sanadkii 1999 lagu iibiyey 307 million oo dollar, waxaa ku soo aaday 20 million oo dollar, kadibna wuxuu u dhaqaaqay howlihiisii gaarka ah ee ku soo caan baxay, wuxuuna ka mid noqday hogaamiyayaasha ganacsiga farsamada iyo warshadaha aduunka oo dhan sidoo kale uguna taajirsan.
Steve King .. Waxbaradu waxay kugu hogaamisaa cabsi
Marka magaca “Stephen King” la sheego, waxaa markiiba madaxaaga ku soo dhacaaya suugaanta argagaxa leh. King waxaa loo arkaa mid ka mid ah qorayaasha buugagta naxdinta ama argagaxa leh ee ugu caansan dunida oo dhan, buugagta uu soo saaray ayaa la iibsaday in ka badan 350 milyan oo nuqul oo adduunka oo dhan, qaarkood ayaa loo bedelay film argagax oo guuleystay oo lagu soo bandhigay hoolalka shaneemooyinka, waxaana ka soo galay dakhli aad u weyn, waxaa ka soo galay lacag ka badan 700 milyan oo dollar.
King ayaa ka qalin jebiyey jaamacada Maine, wuxuuna qaatay shahaada Bachelor-ka ee luqada Ingriiska, waxay aheyd inuu horeyba shaqo ugu bilaabo laakin ma helin shaqo macallimnimo taasi ayaa ka dhigatay inuu goobo shaqo kale si uu isaga bixiyo masaruufkiisa.
Ugu dambeyntii, boqorkii argagaxa ayaa helay sanad kadib shaqo warshad wax lagu dhaqo magaalada Maine, taasi ayaa waxay ka caawisay inuu iska bixiyo deymaha iyo masrufkiisa, isla markaasina halkaasi wuxuu ka sii watay hiwaayadiisa qoritaanka sheekooyinka gaagaaban si uu u iibiyo, waxaa ka mid ah sheekada “graveyard shift” oo 20 sano kadib loo bedelay film aad loogu guuleystay.
Jeff Bezos .. inuu ka tago xirfad cajiib ah oo uu abuuro shirkad
Maanta, Jeff Bezos waa qofka ugu qanisan inta dunida guudkeeda ku nool, iyada oo lagu qiyaasay hantidiisa 160 billion oo dollar oo laga sameeyey shirkada weyn ee “Amazon” oo noqotay mid ka mid ah shirkadaha caalamka ugu xoogga badan dhinacyo badan sida wax ku iibsiga electronic, inkasta oo shirkadu ay jirto oo keliya rubuc qarni oo ah 25 sano, waxay noqotay shirkadaha ugu guulaha badan, alifaad badan uguna sareysa, waxay adduunka oo dhan ku leedahay shaqaale aan ka yareyn tiradooda nus milyan qof.
Markii Jeff Bezos uu qaatay go’aanka ah in uu dhiso ” Amazon” 1994, oo xoolo aan badneyn geliyey, wuxuu ahaa go’aankii ugu adkaa ee uu qaato noloshiisa, markii uu ka baxay jaamacada Princeton wuxuu qaatay shahaadada jaamacada ee Cilmiga Computer-ka iyo Ingineeriyada korontada sanadkii 1987, Bezos ayaa noloshiisa shaqo isla markiiba ku guuleystay markuu qalin jebiyey, wuxuu dalab shaqo ka helay shirkadooyin sanadkii sideetameeyadii sida Intel iyo Bell Labs iyo kuwo kale.
Bezos ayaa shaqo ka bilaabay shirkada “Wall Street” kadibna wuxuu awooday inuu ka gaaro jaggooyinka hogaaminta sare ee shirkada asaga oo ka sameeyey dhaqaale fiican, laakin sidaasi ay tahay Bezos ayaa diiday inuu shaqadiisa sii wato, wuxuuna go’aansaday inuu furo shirkadiisa cusub ee “Amazon” sanadkii 1994, asaga oo markaasi jiray 30 sano, shirkadaasi ayaa markii dambe isu bedeshay shirkada ganacsiga ugu weyn ee digital-ka dunida oo dhan.